ICandelo le-NCAA INdibano yeNtshona-Koloni: I-SAT Score Comparison
Ukuqhathaniswa kobucala-nge-Side ye-College Admissions Data kwi-10 yeCandelo leZikolo
INgqungquthela yeNyakatho-ntshona yenziwe ngamaziko angama-10 abucala kunye neziko elilodwa loluntu. Zininzi zezikolo zingamaKatolika. Ubungakanani nobuntu bezikolo ziyahluka kakhulu, njengemigangatho yokwamkelwa. Ishati elapha ngasentla ibonisa izikolo ze-SAT eziphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile. Ukuba izikolo zakho ziwela ngaphakathi okanye ngaphaya kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwenye yezi zikolo ezi-10 zeNkomfa zeNkomfa.
Qhubeka ukhumbule ukuba ama-25% abafundi ababhalisile bafumana izikolo ze-SAT ngaphantsi kwezo zidweliswe.
Khumbula kwakhona ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avunyelwe kule Candelo I iikholeji kunye neeyunivesithi ziya kufuna ukufumana irekhodi elomeleleyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi enentsingiselo yexesha elichanekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa .
Izikolo ze-SAT zeNkomfa ze-SAT (phakathi kwe-50%)
Yunivesithi yaseBryant - - - - - -
IYunivesithi yaseKentucky State University 450 550 450 550 - -
ILong Island University eBrooklyn - - - - - -
University of Mary Mary University 480 580 460 580 - -
IYunivesithi yaseRobert Morris 470 560 470 580 - -
IYouth University Heart Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa
St Francis College 420 510 410 520 - -
IYunivesithi yaseSt Francis 480 570 480 590 - -
College Wagner - - - - - -
2017 UMTHETHO Iindleko, iMirhumo kunye neeMigodi
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiiKholeji zeMontana zeMinyaka emine
Ukuguqula UMTHETHO Ulinganisa izikolo ze-SAT
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiiKholeji zaseNew Mexico zaseNyaka ezine
UMTHETHO Ulinganisa ukungeniswa kwiNyuvesi yaseMetro Atlantic Athletic
I-SAT kunye noMTHETHO I-Scores yoKwamkelwa kwiikholeji ze-Vermont zonyaka oneminyaka emine
Yiyiphi i-Good Chemistry ye-SAT yesiGaba soVavanyo loMxholo ngo-2018?
I-Edinboro University yasePennsylvania Admissions
Iimidlalo zokuPhakamisa eziphezulu kunazo zonke kwi-NHL History
Intetho yeSaikou ngesiJapan
I-Turnberry Links: I-Ailsa Course
I-Centeotl - U-Aztec UThixo (okanye uthikazikazi) weMizi
Ukutshatyalaliswa kweMitshato kunye neMiddo ephakathi
Iingelosi eziphambili ze-4 Izinto: Umlilo, Umlilo, Amanzi kunye nomhlaba
Ifa leQin Dynasty
I-Top 10 yeFree Front Films
ITyunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data